४० लाख पाउने लोभमा ऋण लिएको ५० हजार पनि डुब्यो ! - Darpanpost
» समाज अंक: 11615
४० लाख पाउने लोभमा ऋण लिएको ५० हजार पनि डुब्यो !
Darpanpost बिहिबार, आश्विन १८, २०७५ मा प्रकाशित
१८ असोज, काठमाडौं । चिठ्ठा पर्‍यो भन्दै ठगी धन्दा चलाउने गिरोहका केही सदस्यहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर समय समयमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, न यस्ता प्रकृतिका ठगीमा कमी आएका छन् न त सर्वसाधारण सचेत नै भएका छन् ।
सजिलै मोटो रकम पाउने प्रलोभनमा लोभिँदा ठगिनेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यस्तै गिरोहको पछिल्लो शिकार बनेकी छिन्, खरिता खड्का ।
खड्काका अनुसार उनलाई एक व्यक्तिले भाइबरमा कल गरेर भनेका थिए, ‘तपाईलाई बधाई छ, २५ लाख रुपैयाँ भारु अर्थात् नेपाली ४० लाख रुपैयाँ जित्नु भएको छ ।’ भाइबरमै उनले चिठ्ठा परेको कागजपत्र समेत प्राप्त गरिन् ।
मोटो रकम पाउने सुनेपछि उनलाई ठगको जालोमा फस्न कत्तिवेर पनि लागेन ।
ऋण गरेर दिएको ५० हजार…
कुराकानीका क्रममा पैसा पाउनका पहिले कर वापतको ५० हजार रुपैयाँ खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भाइबरमै भनियो ।
‘४० लाख पाउने भएपछि ५० हजार तिर्नु ठूलो कुरै भएन’, उनले सुनाइन्, ‘ऋण खोजेर मोरङ जिल्लामा निकाल्न मिल्न गरी जीवानन्द घिमिरेको नाममा सिभिल बैंक, बानेश्वर शाखाबाट २ पटक गरेर ५० हजार रुपैयाँ पठाएँ ।’
दुई पटक गरेर उनले ५० हजार रकम त पठाइदिइन् तर, भाइबरबाट पैसा माग्ने क्रम अझै रोकिएन । रकम अपुग भएको भन्दै थप २५ हजार पठाइदिन आग्रह गरियो ।
तब मात्र सरिताको मनमा चिसो पस्यो । उनले त्यसवेला भने आफ्नो बुबालाई पनि ठगिएको आशंका गर्दै जानकारी गराइन् ।
शंका लागेपछि उनीहरु उजुरी लिएर महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकु पुगे ।
महाशाखामा आफू ठगिएको विवरणसहितको निवेदन दिएपछि अहिले प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्रप्रसाद उप्रेती भन्छन्, ‘यस्तो घटनामा हामी निवेदन लिएर अनुसन्धान थाल्छौं । त्यसपछि पैसा लिने व्यक्ति आइडन्टिफाइड भएपछि परिसर, काठमाडौंमा उजुरी दर्ता हुन्छ ।’
उनका अनुसार नेपाल नागरिक संलग्न भएको त्यस्ता घटनामा भने अभियुक्त पक्राउ परेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
तर, विदेशी नागरिक संलग्न भएको हकमा भने अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल पनि भाइबर, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सर्वसाधारणलाई ठग्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गर्छन् ।